သုံးသပျခကျြမြား Archives - Page2of7- ဒိုးမယျ
ချောကလက် အဖြူရောင် နဲ့ အနက်ရောင် ဘာကွာခြားလည်း?
ချောကလက် အဖြူရောင် နဲ့ အနက်ရောင် ဘာကွာခြားလည်း? ချောကလက်ဆိုတာ ကလေးကအစ လူကြီးအဆုံး ကြိုက်ကြတဲ့ အစားအစာပါ။ ချောကလက်ဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ တော်ဝင် အစားအသောက် အဖြစ်တောင်...
KFC အကြောင်းသင်မသိသေးတဲ့အချက် (၇) ချက်
ကမ္ဘာမှာ အကြီးမားဆုံးနှင့်အအောင်မြင်ဆုံး fast food စားသောက်ဆိုင်တွေထဲတွေကတစ်ဆိုင် ဖြစ်တဲ့ စတင်တည်ထောင်သူ Colonel Sanders ရဲ့မိသားစု နာမည်ကိုပေးထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်၊ KFC ဒါမှမဟုတ် Kentucky Fried...